Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment काेराेना खाेपकाे दाैडमा अरू कुन–कुन छन् ? - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, १७ मंसिर : बेलायत फाइजनर–बायोटेक कम्पनीले बनाएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप प्रयोगका लागि विश्वव्यापी रूपमा अनुमोदन गर्ने विश्वको पहिलो देश बनेको छ ।
बेलायतको नियामक, एमएचआरएले खोप कोरोनाका बिरामीका लागि ९५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी देखिएको र प्रयोगका लागि सुरक्षित देखिएको बताएको हो । केही दिनभित्रै उच्च प्राथमिकतामा रहेको समूहलाई खोप दिन सुरु गरिने बताइएको छ ।
अक्सफाेर्ड-एस्ट्राजेनेकाकाे खाेप : याे भाइरल भेक्टर प्रकारकाे खाेप हाे जसमा जेनेटिकली माेडिफाइड भाइरसकाे प्रयाेग गरिएकाे छ । यसलाई फ्रिजमा सामान्य तापमानमा भण्डारण गर्न सकिन्छ र यसलाई दुई खेप लगाउनुपर्छ ।
अहिलेसम्म क्लिनिकल परीक्षणमा याे ६२ देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रभावकारी पाइएकाे छ । याे खाेपकाे प्रति डाेजकाे मूल्य चार डलरसम्म हुनेछ ।
माेडेर्नाकाे खाेप : याे एमआरएनए प्रकारकाे काेराेना खाेप हाे जसलाई भाइरसकाे जेनेटिक कोडकाे केही टुक्रा मिलाएर बनाइँदै छ । यसलाई माइनस २९ डिग्री तापमानमा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई ६ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । यसकाे दुई डाेज लगाउनुपर्नेछ र अहिलेसम्मकाे क्लिनिकल परीक्षणमा याे ९५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी पाइएकाे छ । याे खाेपकाे प्रति डाेजकाे मूल्य ३३ डलरसम्म हुनेछ ।
फाइजरकाे खाेप : मेडेर्नाकाे खाेप जस्तै याे पनि एमआरएनए प्रकारकाे काेराेना खाेप हाे । अहिलेसम्मकाे क्लिनिकल परीक्षणमा याे खाेप ९५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी पाइएकाे छ । यसलाई माइनस ७० डिग्रीकाे तापमानमा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ । याे खाेपकाे दुई डाेज दिइनेछ र प्रति डाेजकाे मूल्य १८ डलरसम्म हुनेछ ।
गामालेयाकाे स्पुतनिक–भी खाेप : याे अक्सफाेर्डकाे खाेप जस्तै भाइरल भेक्टर प्रकारकाे खाेप हाे, अहिलेसम्मकाे क्लिनिकल परीक्षणमा याे खाेप ९२ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी पाइएकाे छ । यसलाई फ्रिजमा सामान्य तापमानमा भण्डारण गर्न सकिनेछ र यसकाे दुई डाेज लिनुपर्ने हुन्छ । याे खाेपकाे प्रति डाेजकाे मूल्य ७ दशमलव ५० डलरसम्म हुन्छ ।
यसका साथै रुस स्पुतनिक नामकाे एक अर्काे खाेपकाे प्रयाेग गरिरहेकाे छ । त्यस्तै चिनियाँ सेनाले क्यानसाइनाे बायाेलजिक्सले बनाएकाे एक खाेपलाई अनुमति दिएकाे छ । याे दुई खाेप अक्सफाेर्डकाे खाेप जस्तै भाइरल भेक्टर टाइप खाेप हाे ।
(स्रोत – खाेप बनाउने कम्पनी र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेकाे तथ्याङ्कअनुसार )
नेपालमा संक्रमण हुनेको संख्या दुई लाख ७० हजार नाघ्यो
देशभर ६२ अस्पतालमा १२० खोप केन्द्र, क-कसले पाउँछन् पहिलो चरणमा खोप ?
टेकु अस्पतालका डा. राजभण्डारीले लगाउने, नेपालमा कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप
राष्ट्रपतिद्वारा कारोनाविरुद्धको अभियानमा सेवा प्रदान गर्ने सबैमा आभार व्यक्त
अब हरेक महिना भोटिङका आधारमा उत्कृष्ट खेलाडी छनौट
जनकपुर यातायात कार्यालयमा अख्तियारको छापा, दुई जना पक्राउ